သင်အလွန်အကျွံတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေသလား ဆီးလမ်းကြောင်းအထူးကုဆရာဝန်ကြီး Tobias Köhler၊ စိတ်ရောဂါကုသသူ Dan Drake - သင့်ရဲ့ ဦး နှောက်ပေါ်က ဦး နှောက်
သငျသညျလွန်း Masturbate သလား? ဆီးရောဂါပါရဂူ Tobias Köhler, ကုထုံးဒန် Drake
မျောက် spanking ကြီးမားသောပြဿနာတရပ်ဖြစ်လာသည့်အခါကိုကြည့်ပါ
Markham စစျ, ဇူလိုငျလ 16, 2014 အားဖြင့်
သင်၏နံပါတ်ကဘာလဲ? ဒါကြောင့်သင်အကြိုက်ဆုံး pastime မှကြွလာသောအခါသင်တို့ကိုနှစ်ကြိမ်တစ်ပတ်သို့မဟုတ်တစ်နေ့လျှင်နှစ်ကြိမ် masturbate ပဲဖြစ်ဖြစ်, သငျသညျဖြစ်ကောင်းသင့်ရဲ့ဦးခေါင်း၌ထားပုံရှိသည်။ ကြောင်းအမှတ်အသားပွဲစဉ်သို့မဟုတ်ကျော်လွန်နှင့်သင်ကသိပ်လုပ်နေလုပ်နေသလားဆိုတာကိုအံ့သြစတင်ပါ။
ဤတွင်သတငျးကောငျးင်: ကကျန်းမာတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေလေ့အကျင့်မှကြွလာသောအခါအဘယ်သူမျှမမှော်အရေအတွက်ကရှိတယ်, ဒန် Drake တစ်သတ်မှတ်နိုင်ကြောင်းလိင်စွဲကုထုံးနှင့်လက်တွေ့တိုင်ပင်ကပြောပါတယ်။ "ဒါဟာအနှုတ်လက္ခဏာနည်းလမ်းသင်၏အသက်ကိုထိခိုက်စတင်သည်သည်အထိသို့သော်မကြာခဏသင် masturbate ကပြဿနာမဟုတ်ဘူး," Drake ကရှင်းပြသည်။
ဒီတော့တဲ့အခါအန္တရာယ်ကင်းစစ်ရေးလေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုအန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်စွဲသို့လှည့်ပါသလဲ? ဒီနေရာတွင်သင်၏လက်ကို holster နှင့်သင့်လားတစ်ခုတိုးချဲ့ breather ပေးရနျလိုအပျညွှန်ပြစေခြင်းငှါရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါလက္ခဏာများဖြစ်ကြသည်။
သင်ကိုယ်တိုင်နာကျင်ပါတယ်။ ဟုတ်ပါတယ်, တချို့ယောက်ျားတွေဒဏ်ရာ၏အချက်မှချွတ်ရိုက်နှက် Tobias Köhler, MD တောင်ပိုင်းအီလီနွိုက်တက္ကသိုလ်မှဆီးရောဂါပါရဂူကပြောပါတယ်။ အဲဒီဒဏ်ရာအသားအရေ chaffing သကဲ့သို့ပျော့တစ်ခုခု, ဒါမှမဟုတ်သူက stroking စဉ်အလွန်အကျွံဖိအားသုံးပြီးထံမှဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်ကြောင်းကိုသင်၏လိင်တံ၏ရိုးတံများတွင် plaque ၏ Peyronie ရဲ့ရောဂါ-တစ် buildup တူသောပိုပြီးလေးနက်ခွအေနအေဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒေါက်တာKöhlerရှင်းပြသည်။ (အခြေခံအားဖြင့်, သင်ခက်လွန်းသည်သင်၏ကြက်သားသီးနိုင်ပါတယ်။ ) သင်ကိုယ်သင်နာကျင်နေလျှင်သင်ပြန်ဖြတ်ဖို့လိုအပျသူကသတိပေးလိုက်သည်။
ဒါဟာသင့်ရဲ့ဆက်ဆံရေးသို့မဟုတ်သင့်အလုပ်ထိခိုက်ပါတယ်။ ဒီတစ်ခါလည်းသင်မယ့်အစားသူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူတက်တွေ့ဆုံ flog မှသောကြာနေ့ညတွေမှာနေ။ သငျသညျလူတို့သညျရဲ့အခန်းတစ်ခန်းထဲမှာကိုယ့်ဟာကိုယ်လက်ပေးခြင်းကြောင့်သို့မဟုတ်သင်အစည်းအဝေးများမှနှောင်းပိုင်းတွင်ခဲ့ပါတယ်။ သင့်ရဲ့အလေ့အကျင့်သင်၏လူမှုဘဝထိခိုက်သို့မဟုတ်သင့်အလုပ်-သို့မဟုတ်ထွက်ရတဲ့နှင့်မိတ်ဖက်-သူတွေကိုရှာဖွေတာကနေသင်တို့ကိုတားမြစ်ထားသည်ကိုသင်ရှာတွေ့ထားလျှင်သင်သည်သင်၏လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်ကိုထိန်းညှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်လက္ခဏာများ, Drake ကပြောပါတယ်။
သငျသညျပြဿနာများ ejaculating ရှိသည်။ တိကျတဲ့လက်လှုပ်ရှားမှုများကို-ကိုရှာဖွေသူတို့လိင်ကာလအတွင်းစိတ်လှုပ်ရှား၏တူညီသောအမျိုးအစားထပ်ဖွမရဘူးနှင့်အတူ coupled porn ၏လှုံ့ဆော်မှု-ပြော, အချို့အမျိုးအစားသတ်သတ်မှတ်မှတ်အမျိုးအစားများကိုသုံးပြီးတွေအများကြီး masturbate သူတခြို့ယောက်ျားတွေဒေါက်တာKöhlerရှင်းပြသည်။ အခြေခံအားဖြင့်ကထွက်ပွတ်နယ်သာသင့်ရဲ့တစ်ကိုယ်တော်လုပ်ရပ်တုံ့ပြန်ချွတ်ရဖို့သင့်ဦးနှောက်နှင့်ခန္ဓာကိုယ်သွန်သင်, သင်ပြဿနာများကြောင့်တက်လာပြီတစ်ခုသို့မဟုတ်အစစ်အမှန်-ဘဝလက်တွဲဖော်နှင့်အတူပြီးသွားခံစားရသည်။ "အဲဒီဖြစ်ပျက်လျှင်, သင်ဖြေရှင်းခံရဖို့လိုပြဿနာတစ်ခုရှိတယ်" ဟုဒေါက်တာKöhlerကပြောပါတယ်။
သင်ကစဉ်းစားရပ်တန့်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ မည်သည့်အချိန်တွင်မည်သို့မည်ပုံလာမည်ကိုစဉ်းစားခြင်းဖြင့်အာရုံပျံ့လွင့်နေသည်ဟုမကြာခဏခံစားရလျှင်၎င်းသည်ပြင်းထန်သောအပြုအမူကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနေသည့်ခိုင်မာသည့်အရိပ်အယောင်ဖြစ်သည်ဟု Drake ကပြောကြားသည်။
သငျသညျကိုပြန်ဖြတ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်, ဒါပေမယ့်သင်ကျရှုံးခဲ့ဖူးပါတယ်။ "စွဲမဆိုအမျိုးအစားအဓိကသတ်မှတ်ချက်တစ်ခုမှာထိန်းချုပ်မှုတစ်ခုဆုံးရှုံးမှုဖြစ်ပါတယ်" ဟု Drake ကရှင်းပြသည်။ သင်ကထိန်းချုပ်ထဲကင်အသိအမှတ်မပြုသောအခါအသင့်ရဲ့အလေ့အကျင့်ကိုထိန်းချုပ်ရန်စီမံခန့်ခွဲမရနိုငျပါလျှင်ရုံပြဿနာတစ်ခုဆေးလိပ်သောက်သို့မဟုတ်လောင်းကစားသမားများကဲ့သို့, တစ်ခုပြဿနာပါပဲ။
ဤအမှုအလုံးစုံ၏ထိပ်တွင်ရုံ masturbating တို့သည်ကြီးစွာသောစိတ်ကူးမပါသောအခါအချို့ကြိမ်ရှိပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်, ဒေါက်တာKöhlerနှင့်သူ၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်2ပတ်နေ့တိုင်း diddling နီးပါး 50 ရာခိုင်နှုန်းတစ်ဦးလူသားရဲ့သုက်ပိုးအရေအတွက် depletes ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်။ "သင်နှင့်မိတ်ဖက်ကိုယ်ဝန်ရရှိရန်ကြိုးစားနေနေတယ်ဆိုရင်, တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေသည်သင်၏အခွင့်အလမ်းတွေကိုနာကျင်နိုင်" ဟုသူကရှင်းပြသည်။
သင်ပြဿနာတစ်ခုရှိနားလည်သဘောပေါက်လျှင်, သင်ကအကြောင်းဘာလုပ်သင့်သလဲ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပယ်ဖြတ်တောက်ခြင်းအအေးကြက်ဆင်, ဒါမှမဟုတ်နေဆဲကိုယ်ရံဖန်ရံခါငါးလက်ခေါက်ဆစ်ရောသမမွှေခွင့်ပြုနေစဉ်အတွင်းသင့်ရဲ့အလေ့အကျင့်ချုံ့ခြင်းပါဝငျသော "အန္တရာယ်လျှော့ချရေး" နည်းလမ်း: Drake နှစ်ခုအဓိကကိစ္စကိုဖြေရှင်း၏နည်းစနစ်ရှိပါသည်ဟုဆိုသည်။ သင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်အပေါ်ဖြစ်စေကြိုးစားနိုင်ပေမယ့်သင်ကပျက်ကွက်လျှင်တစ်ဦးကုထုံးသို့မဟုတ်လိင်စွဲတိုင်ပင်သင်တစ်ဦးစမတ်ဂိမ်းအစီအစဉ်ကျွမ်းကျင်စွာကူညီနိုင်ကိုမြင်လျှင်, Drake ကပြောပါတယ်။
"ကျန်းမာရေးအန္တရာယ်သို့မဟုတ်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေနှင့်အတူပြဿနာဘာမျှမရှိတယ်" ဟုသူကထည့်သွင်းဖို့အမြန်ပါပဲ။ "ကသင်၏အသက်တာအားထိခိုက်ဖြစ်လာလျှင်မူကား, ထို့နောက်သင်သည်မည်သည့်အခြားအအန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်အလေ့အထကိုသင်အလိုတခုတည်းနဲ့တူပါကကုသရန်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ "